Madaxdii Mustaqbalka dalkeena oo ku jirta xerooyinka Barakacaasha iyo kuwa qaxootiga iyo Balanqaadka UN ka ( DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
Madaxdii Mustaqbalka dalkeena oo ku jirta xerooyinka Barakacaasha iyo kuwa qaxootiga iyo Balanqaadka UN ka ( DAAWO SAWIRADA ) 12/7/2012 9:45:00 A
3.8 bilyan ma soo gaari kartaa somaliya sadax sano gudaheed maxaase isbedeli kara haddiiba ay timaado lacagtaas su.aashaas iyo kuwo kale waxaa ka heli doontaa marka aad si qoto dheer u aqrisatid barwixintaan oo ah mid dhinacyo badan taabaneysa waa madaxdii Mustaqbalka oo ku jirta xerooyinka mbarakacaasha iyo kuwa qaxootiga Daraasaad Cusub oo qaramada midoobay ka soo saartay qorsha sadaxda sano ee soo socoto lacagaha loo yaboohay dadka somaliyeed Warbixi dheer 2013-2015
Guud mar Tusmo Tirooyinka muhiimka ah ee qorsheysan Lafagurista xaaladaha dalka ka jira Guulaha kutladaha Qorshaha howsha Bani aadanimada iyo ujeedoyinka istiraatiijiyadeed Culeysyada ugu waaweyn ee jira Istiratiijiyada qorsheysan xaga bani aadanimada oo sadax sano ah ee loogu talgalay somaliya waa sidaan .
Tirooyinka muhiimka ah ee qorsheysan 3.8 milyan ayaa gargaar u baahan 2.1 milyan waxay ku sugan yihiin dhibaatooyin ama xaalado deg deg ah .
1.1 milyan gudaha dalka ayey ku barakaceen .
1.00.000 waa qaxooti magangalyo doon ah .
236.000 waa caruur da.doodu ka yartahay 5 sano jir ayna heyso nafaqo dari ba,an .
Codsiyada waxay iskuugu jiraan qalab qorsheysan ,isku duwid iyo dhaqaale u uruurin , oo wax looga qabanayo baahiyaha bani aadanimo ee 3.8 milyan oo dhamaantood ah Somali.
Marka ugu horeysa ayaa qorsheyntu gaareysaa mudo sadaxsano ah ,taasi higsaneysa in ay xoojiso barnaamijyadda iyo sida ay dadku ugu adkeystaan dhibaatooyinka jira .
Codsiga waxaa lagu weydiistay $ 1.3 Bilyan sanadka 2013 .
1.3 Bilyan ayaa noqotay maaliyada loo baahan yahay ,369 Boroboosallo .177 hey.addaha ayaa codsaday SOMALIA XAALADA BANI AADANIMO AYAA WELI CAKIRAN .
Mid ka mid ah sadaxdii qofba Somali ah ayaa u bahaan garghaar bani aadanimo .
In ka badan 1.1 milyan qof oo Somali ah ayaa gudaha dalka ku barakacay .
Dadka rayidka ah ayaa weli dhibaatada ugu weyn ka soo gareysaa codlaaha dabada dheeraaday ee dalka ka jira .
Caqabadaha gaarsiinta gargarka bani aadanimo ayaa weli dalka ka jirta Arimaha ugu waaweyn ee keena dhibaatooyinka .
Guulaha kutladaha oo kooban .
1.9 milyan oo caruur iyo haween ah ku jira da.di dhalmada ayaa lag atalaalaay cudurada nolosha halista galiya 986.000 ayaa la gaarsiiyey adegyada cafimaadka asaasiga ah iyo nkan sare .
1.1 milyan qof ayaa la gaarsiiyey gashi maciishadeed oo xiliga la xiriira 690.000 qof ayaa bil kasta la gaarsiinayaa cunto gargaar ah ,lacag kaash ah ama waraaqo wax qiimo leh lagu bedesho .
1.6 milyan qof ayaa biyo nadiif ah .
611.000 qof ayaa la gaarsiyaa qalaba hoy laga dhigto .
523.000 caruur ah 5 sano jir ka yar ayaa la gaarsiiyaa adeeg nafaqo /
366.000 caruur dhalinyar iyo qaangaar ah ayaa la garsiiyaa adeeg wax barasho .
100.000 qof oo ddhibaato ka soo gaartay xadgudubyo la xiriira ilaalinta ayaa helay taageero caafimaad ,sharci ,ama nafsaani bulsho .
89% codsiyadii taageerada dhinaca adeega gaadiidka gargarka bani aadanimada ayaa la bixiyey .
WAXAA JIRA FURSAD LAGU KALA GOYN KARO MEERTADA DHIBAATOOYINKA SOO NOQNOQDAY .
Istiraatiijiyada Baniaadanimo :
CAP 2013 -2015 CAP waxaa uu doonayaa in uu badbaadiyo nolosha uuna hubiyo nolosha uuna dib u dhis ku sameeyo maciishadaha 3.8 milyan qof oo Somali ah kuwaas oo gargar u baahan waxaa uu dhigyaaa qorshe lagu bixinayo taageero nolol badbaadineyd iyo mid maciishadeed ,iyada oo isu keeneyso howlaha cuntada nafaqada .biyaha iyo faydhowrka ,cafimaadka hoyga waxbarashada iyo ilaalinta si .
Wax looga qabto xaalada deg deg ah ee Baniadanimada ee hada dalka ka tagan .
Kheyraadka logu adeegsado si istiraatiiji ah oo wax looga qabanayo arimaha mudada fog iyada oo la wnaajinayo adkeysiga qoysaska ee dhibaatoyinka loo hubiyo qaab kharashaadka si haboon oo waxtar leh loo maamulo .
Si looga faaiidaysto fursadda ,istiraatiijiyada afar –geesle ah ayaa la qaatay Hubinta gargaarka naf-badbadin loo siman yahay oo isku jira .
Ka qeybqadashada sii wanaajinta tayada ,isku –habeynta ,waxqabadka iyo gaaritanka adeegyadda aasaasiga ah iyo koru qaadista barnamijyo shbakada ammaan oo la saadaalinkaro .
Maalgalinta adkeysiga qoyska iyo bulshada .
Xoojinta kartida iyo isku duwida NGO-yada ,bulshooyinka dhibaatooyinka saameeyeen iyo maamulada heer degaan ,gobol iyo qaran.
Iyo laba ujeeddo oo howled:
Sii wanaajinta daahfurnaanta iyo xisaabtanka.
Sii wanaanjinta waafaqsanaanta hababka iyo heykalada horumarinta
Inta ay isbedelayaan.
Deeq-bixiyayaashu deeqsinimo ayey ay muujiyeen,laakiin waxaa loo baahan yahay waxkheyraad la bixiyo dhaafsiisan .
CAP 2012 waxaa uu helay us$668 milyan .57 boqolkiiba wadarta baahida maaliyadeed ee dib loogu noqday ee 2012 ka.
2012 gudihiisa .maaliyadda ay heleen kutlada kala duwan waxa ay aheyd mid aan sineyn ,afar kutladooda ayaa helay wax ka yar 40 boqolkiiba maaliyada ay u baahnaayeen .
Codsiga 2013 ka ee ah 1.3 bilyan waxaa uu hay,addaha baniadanimada u ogolaanayaa in ay kor u qadaan joogitaankooda somaliya si ay u kordhiyaan barnaamijyada ayna u sii wanaajiyan korjoogteynta si loo hubiyo in maaliyadda deeq-bixiyayaasha si haboon loo isticmaalo .
Baahida maaliyaded oo korodhey waxaa keenay gargaar gaarsiinta oo wanaagsanaatey ,kharashaadka howlaha oo kordhay ,dadka soo guryo- noqday ,howsha adkeysiga ,iyo korjoogteynta korortay .
Barnaamijyada ku aaddan adkeysiga waa maalgalin dadka somaliyeed ka cawineysa in ay ka baxaan dhibaatada oo ay u baxaan xaalad degenaan .
Iyada oo diirada la saarayo fursadaha ,waxaa sidoo kale jirta culeysyo .
Sida garsiinta gargaarka Colaadaha iyo amaan darida Korjoogteynta iyo xisaabtan Kartida wada –howlgalayaasha deegaanka Qulqulka maalliyadeed .